Amanqaku okuQhathaniswa kweMigangatho yeYunivesithi yaseCalifornia
Itheyibhile Ukuthelekisa iMidriki 50% UMTHETHO Olinganiselwayo odibeneyo, iMathematika nesiNgesi
Inkqubo yeYunivesithi yaseCalifornia ibandakanya ezinye zeeyunivesithi ezikarhulumente ezilungileyo kwilizwe. Imilinganiselo yokumkelwa kwamanye amazwe iyahluka ngokubanzi. I-campus ye-Merced ivuma abafundi abaneemvavanyo zokulinganisa eziqhelekileyo kanti u-UCLA noBerkeley bathambekele ekuvumeni abafundi abaphumelela phezulu ngaphezu komyinge. Itheyibhile engezansi ichaza phakathi kwe-50% ye-ACT izikolo zabantwana ababhalisile kwi-campus ye-University of California.
Ukuba umgangatho wakho we-ACT ungena ngaphakathi okanye ngaphezulu kwezigaba ezidweliswe apha ngezantsi, ulandelelwe ukuba ungeniswe kwenye yezi zikolo ezinkulu.
Ukuthelekiswa kweMTHETHO Izabelo ezifunekayo zokwamkelwa kwiNyuvesi yaseCalifornia
IYunivesithi yaseCalifornia UMQATHELO WAMAKHARITYHULI UQhathaniso (phakathi kwama-50%
Berkeley 30 34 31 35 29 35 ubone igrafu
Davis 25 31 24 32 24 31 ubone igrafu
Irvine 24 30 23 31 25 31 ubone igrafu
ilos Angeles 28 33 28 35 27 34 ubone igrafu
Merced 19 24 18 23 18 25 ubone igrafu
Riverside 21 27 20 26 21 27 ubone igrafu
ESan Diego 27 33 26 33 27 33 ubone igrafu
Santa Barbara 27 32 26 33 26 32 ubone igrafu
Santa Cruz 25 30 24 31 24 29 ubone igrafu
Gcina ukhumbule ukuba iYunivesithi yaseCalifornia iya kusebenzisa i-ACT okanye izikolo ze-SAT ngexesha lokufaka isicelo, ngoko ukuba izikolo zakho ze-SAT zinamandla kunama-ACT score, akudingeki ukhathazeke ngoMthetho.
Khumbula kwakhona ukuba i-25% yabafundi abhalisele phantsi bafumana amanqaku angaphantsi kwetafile apha ngasentla. Uza kulwa nokulwa kwinqanaba elingaphantsi kwemigangatho engaphansi kwe-ACT, kodwa ungayeki ukuvunyelwa xa izikolo zakho zokuvavanya ziwela ngaphantsi kweenombolo ezingama-25%.
Qaphela ukuba ii-ACT izikolo ziyingxenye enye yesicelo, kwaye irekodi yakho yesikolo esiphezulu ithwala ubunzima obuninzi.
Amagosa adluliselwe kwiYunivesithi yaseCalifornia aya kufuna ukubona ukuba uzitshatyalaza ngokwakho kwikharityhulam yekharityhulam eqinile . UkuPhakanyiswa okuPhambili, i-Baccalaureate yamazwe ngamazwe, iiNtlonelo, kunye neeklasi zokuBhalisa kwaBafundi bonke banokudlala indima ebalulekileyo ekuboniseni ukuba ulungele imingeni yekholejini.
Kwakhona uqaphele ukuba inkqubo yeYunivesithi yaseCalifornia isebenzisa inkqubo yokwamkelwa epheleleyo . Izigqibo zokwamkelwa kwezicelo zisekelwe kwiinkcukacha ezingaphezulu kweenkcukacha. Uza kufuna ukubeka ixesha kunye nokunyamekela kwiMibandela Yengqondo Yomntu , kwaye uya kufuna ukukwazi ukubonisa ukubandakanyeka okubalulekileyo kwinqanaba eliphakamileyo. Umsebenzi okanye amavavolontiya angakomeleza nesicelo.
Ukuze ufumane ingcamango ebonakalayo yokumkelwa okupheleleyo, nqakraza kwi "khangela igrafu" iqhagamshela ngakwesokudla komqolo ngamnye kwitafile ngasentla. Kulapho, uya kubona indlela abanye abafundi abaphumelele ngayo kwisikolo ngasinye-bangaphi abantu abawamkelekileyo, abanqatshiwe, okanye abaluliwe, kunye nendlela abafumana ngayo kwi-SAT / ACT, namabakala abo. Unokufumana ukuba abanye abafundi abanamabanga aphantsi / amanqaku amkelwe, kwaye amanye amabanga aphakamileyo / amanqaku awanqatshiwe okanye abhalisiwe. Umfundi onomgangatho ophantsi we-ACT (ezantsi ngaphantsi kwezigaba ezidweliswe apha) unokusamkelwa nakweyiphi na yezi zikolo, ngaphandle kokuba zonke izicelo zizinzileyo.
Ezihlobene UMTHETHO Wamaxwebhu:
Ukuba umThetho wakho weempawu ziphantsi kakhulu kwiinqununu zezikolo ze-UC, qiniseka ukuba ukhangele le DET yoqhathaniso nedatha ye-California State University system . Imigangatho yokwamkelwa kweCal State ngokuqhelekileyo (ngaphandle kwemisebenzi) iphantsi kweenkqubo ze-UC.
Ukuba ufuna ukubona indlela inkqubo ye-UC iyenzela ngayo ezinye iifuni-zuni zikarhulumente eziphezulu, jonga uqikelelo lo mzekelo we-ACT kumanyunivesithi aphakamileyo ewonke kuluntu. Uza kubona ukuba akukho zikoyunivesithi zikarhulumente ezikhethileyo kuneBerkeley.
Ukuba sibeka iikholeji ezizimeleyo zaseCalifornia nakwiiyunivesithi kumxube, uya kubona ukuba iStanford, iPomona kunye namanye amabini amaziko anesibalo esiphezulu se-admission kunokuba sele ekhetha kakhulu izikolo zaseYunivesithi yaseCalifornia.
Indlela yokutshintshwa umsila weColk Truck okanye iBrab Light Light
"Ka-Chow!" Iingcaphula ezikhunjulwayo KwiSahlulo 'seKota.'
Iinqwelo zokuqala ze-Ironclads: I-HMS Warrior
Indlela iAnts kunye neAphids zinceda ngayo